Baidoa Media Center » Hillary Clinton oo la kulmi doonto sadexda masuul ee ugu sareyso dowlada Soomaaliya. (Warbixin)
Hillary Clinton oo la kulmi doonto sadexda masuul ee ugu sareyso dowlada Soomaaliya. (Warbixin)
August 2, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Xoghayaha arimaha dibada ee dalka Mareykanka Hillary Clinton oo booqasho ku mareyso qaarada Afrika ayaa lagu wadaa inay booqasho kusoo gaarto dhanka bari ee qaarada.
Mrs Clinton oo hada ku sugan dhanka galbeed ee qaarada Afrika, ayaa hada waxaa la filayaa inay soo gaarto dalka Uganda iyo sidoo kale dalka Kenya halkaasoo ay kula kulmi doonto madaxda sare ee dowlada Soomaaliya.
Waxyaabaha ay kala hadli doonto madaxda sare ee dowlada Soomaaliya ayaa waxaa kamid ah inay ka dalban doonto madaxda sare ee dowlada Soomaaliya inaysan iskusoo taagin xilalka dowlada cusub ee ay Soomaaliya yeelan doonto.
Ilo ka ag dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa u sheegay shabakada warbaahinta baidoamedia.com inuu xaalku ku xunyahay madaxda sare ee dowlada Soomaaliya oo hada musharaxnimadoodu tahay mid aan la hubin.
Haddii ay run noqoto hadal haynta ah in Mrs Clinton ay ku amri doonto madaxda dowlada Soomaaliya inaysan iskusoo taagin xilalka sare